Uhla lwezinombolo zefoni laseCosta-Rica | Uhlu Lokukhangisa | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhla lwezinombolo zocingo laseCosta-Rica
Izinombolo zocingo zaseCosta-Rica
Uhlu lwezinombolo zocingo lweCosta-Rica lungezwe lapha lonke uhlu lwamuva lwabathengi olusha nolusha. Uhlu lwefoni lwaseCosta-Rica lunikezela ngezinsizakalo zokuhlanganisa uhlu lwezinsizakalo zokuxhumana ezisuselwa kunqubo yakho yokuqondisa ye-niche. Yonke imininingwane yethu yocingo iqoqa kusuka emthonjeni omkhulu obalulekile ngesihloko somsebenzi, i-geography, imboni, usayizi wenkampani, usayizi wabasebenzi njll.
Idatha yeTelemarketing ibuye ibuyekezwe njalo futhi ngokucophelela kulo nyaka. Singahlanganisa uhlu lokukhangisa lweselula oluqondiswe kakhulu olunentshisekelo yakho kulokho ongakunikela ngakho. Uma ufuna ukuthenga lolu hlu lwezinombolo zocingo zeCosta-Rica vele uchofoze ukuthenga manje bese uthole imininingwane ephelele yokuxhumana.
Thenga uhlu lwabathengi beCosta-Rica
Uhlu Lwezingcingo Lwabathengi baseCosta-Rica
Ucingo lwentengiso luyindlela enhle yokuthengisa le mikhiqizo bese ulandela namakhasimende akhona ukuwagcina enza umshado. Kunemikhiqizo eminingi nezinsizakalo okumele zithengiswe ngocingo futhi ezingathengiswa nge-ecommerce. Ukusebenzisa uhlu lwezinombolo ezihlosiwe kuzokusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho ngamathuba wokuthengisa angeziwe, ungasatholakali kodwa upheqa endaweni efanele.
I-Database Yeposi Lokugcina noma i-Latestdatabase.com yindawo ethembekile kunazo zonke ekunikezeni izidingo zakho maqondana nohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseCosta-Rica usizo olukhulu lwentengiso, ukumaketha kwe-sms kanye nokubiza okubandayo kokuthola amathemba aqinisekisiwe wokumaketha kalula imikhiqizo yakho kanye nezinsizakalo. Le database yiyona enembile kakhulu kunolunye uhlu lwabathengi bezinye izingosi.
Uhlu lwabathengi beCosta-Rica noma uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olusuka eDashini Lokulawulwa Kamuva le-imeyli noma i-latestdatabase.com liqukethe amarekhodi aphelele abalelwa ku-10,000 ohlu lohlu lwabathengi olufinyelela ku- $ 300, ngokukhokha ngesikhashana esithile kanye nesoftware engenziwa ngokushesha engaba ifayela le-Excel CSV ifomathi. Izindlela zokukhokha zingenza okuyi-visa yekhadi, ikhadi le-master, paypal, skrill, inyunyana yasentshonalanga namakhadi amaningi namadivayisi ukukhetha ukukhetha ukukhokha izinsizakalo zethu ezinikezwa esizeni sethu.
Costa-Rica Inombolo Yocingo Umbuzo & Impendulo